China LEDB730 Wall Mounting LED OT Jiro miaraka amina mpamokatra sy mpamatsy artikaly | Wanyu
LEDB730 Fametahana rindrina LED Jiro OT miaraka amin'ny sandry voatonona
Ny jiro LED730 OT dia misy amin'ny fomba telo, valindrihana valindrihana, finday ary rindrina.
LEDB730 dia manondro jiro OT nitaingina rindrina.
Ho an'ny efitrano fandidiana miaraka amina boaty manadio, ny jiro OT petal dia afaka misoroka ny fikorianan'ny rivotra ary mampihena ny faritra mikorontana amin'ny fikorianan'ny rivotra laminera. Ny felany telo, ny tadim-boanjo osramika enimpolo, dia manome ny hazavan'ny 140,000lux sy ny maripana miloko 5000K ary ny max CRI an'ny 95. Ny masontsivana rehetra dia azo ovaina amin'ny ambaratonga folo amin'ny tontonana fanaraha-maso ny efijery LCD. Ny tahony dia vita amin'ny fitaovana vaovao, mahatohitra ny mari-pana ambony sy ny tsindry avo. Omeo sandry roa amin'ny lohataona, haitraitra lafo vidy ary lafo vidy.
1. Mifanaraka amin'ny fanadiovana ny laminera
Ny jiro OT petal dia afaka misoroka ny fikorianan'ny rivotra ary mampihena ny faritra mikorontana amin'ny fikorianan'ny rivotra laminera.
Ny mpitazona jiro OT dia famolavolana mihidy tanteraka. Ny fonenana azo esorina dia mahatohitra ny mari-pana avo sy ny tsindry avo izay mahafeno tanteraka ny fepetra famonoana otrikaretina isan'andro.
2. Fanaraha-maso LCD Touchscreen fanaraha-maso mpampiasa
3. Jiro mangatsiaka
Karazan-jiro LED vaovao dia tsy misy taratra infrared, izay manala ny hafanana eo ambanin'ny jiro OT ary manakana ny fiakaran'ny maripanan'ny lohan'ny mpandidy sy ny faritra maratra.
4. Natao ho an'ny efitrano ambany valindrihana
Ny efitrano fandidiana sasany dia ambany ny haavon'ny gorodona na ny faritra kely, izay tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny efitrano fandidiana amin'ny valindrihana. Afaka misafidy jiro OT karazana rindrina ianao.
Misy safidy roa ho an'ny sandan'ny lohataona, fitaovam-piadiana efajoro namboarina, ary sandry lohataona ondal nohafarana, mety ho an'ny mpanjifa manana teti-bola samihafa
6. Fomba roa hampifandraisana ny famatsiana herinaratra
Misy fomba roa hampifandraisana ny famatsian-jiro. Raha tsy voatokana amin'ny rindrina ny tadin'ny herinaratra dia azonao atao ny mampifandray ny herinaratra amin'ny alàlan'ny interface ivelany.
Jiro LEDB740 Wall OT
Previous: LEDB620 Wall Type LED fandidiana fandidiana avy amin'ny mpamokatra
Manaraka: LEDB740 Wall Mount LED hazavana miasa amin'ny teatra miaraka amin'ny vidin'ny orinasa
LEDB620 Wall Type LED fandidiana fandrehitra avy Ma ...
LEDL200 LED Mobile Medical Examination Fahazavana wi ...
Fanadihadiana ara-pitsaboana malefaka LEDL100 LED finday ...